ကား နံပါတ်ချိန်းထား လျှက် ကားပဲတွေ့ပြီး လူက ဘယ်ရောက်မှန်း မသိ ထူး ဆန်းစွာပျောက်ဆုံးနေမှု – Zartiman
ယခု ကားပြန်ရပြီး ဖြစ်သော်လည်း လူမှာမူအဆက်အသွယ် လုံးဝ မရပဲ ထူးဆန်းစွာပျောက်ဆုံးနေသဖြင့် တစုံတခုပရောဂကြောင့်များလား အန္တရာယ် တခုခု ကြုံတွေ့နေရသည် များလား အဖွဲ့အစည်းတခုခုက များ ဖမ်းခေါ်သွားသလား ဆို သည်ကို အထူးစိုးရိမ်လာ ၍ လူမှုကွန် ယက်မှတဆင့် အကူအညီ တောင်းခံလာခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ပျောက်ဆုံးသည်မှာ (၂)ပတ်ကျော် ကြာလာပြီးဖြစ်ပြီးမိသားစုဝင်များ အရမ်းစိုးရိမ်နေကြပါ၍ သိရှိသူများ တွေ့ရှိသူများ သတင်းတခုခုရ သူများ အနေဖြင့် အောက်ပါ ဖုန်းနံပါတ်များသို့ ကူညီဆက်သွယ်ပေးနိုင်ပါရန် အကူအညီတောင်း မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း – 09 76300 9943 . 09 76616 5821
ပျောက် ဆုံးသူ နာမည်က – ကိုကျော်ကျော်
အသက် – (၄၂) နှစ်
အလုပ်အကိုင် – သုထက်ကျော် အထည်ဆိုင် မုဒုံမြို့။
ဖြစ်စဉ်အကျဉ်းကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ (15.6.2020)ရက်နေ့တုန်းက ကိုကျော်ကျော် ဟာ Bago 6L-8595 ယာဉ်ဖြင့် မြဝတီသွားမည်ဟု ပြော ကာအိမ်မှ ထွက်သွားပြီးကတည်းက ပျောက်ဆုံးသွားပါသည်။
နေအိမ်မှ ထွက်သွားပြီး (၁၀)ရက်ခန့်အကြာတွင် အဆက်အသွယ်လဲ လုံးဝ မရတော့ပဲ ကားရောလူပါ ပျောက်ဆုံးနေကြောင်း လူမှုကွန် ယက်ပေါ် ကြေငြာတင်လိုက်သောအခါ အိန္ဒူ ရဲစခန်းမှ ပိုင်ရှင်မဲ့ ကားတစ်စီးအား လွန်ညရွာတွင် တွေ့ရှိ၍ထိန်းသိမ်းထားကြောင်း ဆက် သွယ် လာသဖြင့် အပိုင်ရဲစခန်းချင်း ချိတ်ဆက်ပြီး သွားရောက်စီစစ် ရာ ကိုကျော်ကျော် ယူဆောင်သွားသော ကား မှန်ကြောင်းစစ်ဆေး တွေ့ရှိရပါသည်။
ထူးခြားသည်မှာ ကားနံပါတ် ပြောင်းလဲထားခြင်းဖြစ်သည်။ ကားနံပါတ် Bago 6L-8595 နံပါတ်မှ 3J-4587 ဖြစ်နေသည် ကို စစ်ဆေးတွေ့ ရှိရပါသည်။
အိန္ဒူ နယ်မြေရဲစခန်းမှ ပြောပြချက်အရ ၎င်းကားအား (15.6.2020)ရက်နေ့ မွန်းလွဲပိုင်းက လွန်းညရွာတွင် ပိုင်ရှင်မဲ့ ရပ်ထားသည်ကို တွေ့ ရှိရ၍ ရွာသူရွာသားများမှ ဘယ်အချိန် ပိုင်ရှင် လာပြန်ယူမလဲဟူ၍စောင့်ကြည့်နေခဲ့ကြောင်း (၃)ရက်ခန့်ကြာသည်အထိ ပိုင်ရှင်မပေါ်ပဲ ရပ် ထားသည်ကို တွေ့ရှိရ၍ ရဲစခန်းထံသို့ အပ်နှံပေးခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။
ကား နံပါတျခြိနျးထား လြှကျ ကားပဲတှပွေီ့း လူက ဘယျရောကျမှနျး မသိ ထူး ဆနျးစှာပြောကျဆုံးနမှေု
ယခု ကားပွနျရပွီး ဖွဈသျောလညျး လူမှာမူအဆကျအသှယျ လုံးဝ မရပဲ ထူးဆနျးစှာပြောကျဆုံးနသေဖွငျ့ တစုံတခုပရောဂကွောငျ့မြားလား အန်တရာယျ တခုခု ကွုံတှနေ့ရေသညျ မြားလား အဖှဲ့အစညျးတခုခုက မြား ဖမျးချေါသှားသလား ဆို သညျကို အထူးစိုးရိမျလာ ၍ လူမှုကှနျ ယကျမှတဆငျ့ အကူအညီ တောငျးခံလာခွငျး ဖွဈပါသညျ။
ပြောကျဆုံးသညျမှာ (၂)ပတျကြျော ကွာလာပွီးဖွဈပွီးမိသားစုဝငျမြား အရမျးစိုးရိမျနကွေပါ၍ သိရှိသူမြား တှရှေိ့သူမြား သတငျးတခုခုရ သူမြား အနဖွေငျ့ အောကျပါ ဖုနျးနံပါတျမြားသို့ ကူညီဆကျသှယျပေးနိုငျပါရနျ အကူအညီတောငျး မတ်ေတာရပျခံအပျပါသညျ။
ဆကျသှယျရနျဖုနျး – 09 76300 9943 . 09 76616 5821
ပြောကျ ဆုံးသူ နာမညျက – ကိုကြျောကြျော
အသကျ – (၄၂) နှဈ
အဘအမညျ – ဦးသာအောငျ
အလုပျအကိုငျ – သုထကျကြျော အထညျဆိုငျ မုဒုံမွို့။
ဖွဈစဉျအကဉျြးကတော့ လှနျခဲ့တဲ့ (15.6.2020)ရကျနတေု့နျးက ကိုကြျောကြျော ဟာ Bago 6L-8595 ယာဉျဖွငျ့ မွဝတီသှားမညျဟု ပွော ကာအိမျမှ ထှကျသှားပွီးကတညျးက ပြောကျဆုံးသှားပါသညျ။
နအေိမျမှ ထှကျသှားပွီး (၁၀)ရကျခနျ့အကွာတှငျ အဆကျအသှယျလဲ လုံးဝ မရတော့ပဲ ကားရောလူပါ ပြောကျဆုံးနကွေောငျး လူမှုကှနျ ယကျပျေါ ကွငွောတငျလိုကျသောအခါ အိန်ဒူ ရဲစခနျးမှ ပိုငျရှငျမဲ့ ကားတဈစီးအား လှနျညရှာတှငျ တှရှေိ့၍ထိနျးသိမျးထားကွောငျး ဆကျ သှယျ လာသဖွငျ့ အပိုငျရဲစခနျးခငျြး ခြိတျဆကျပွီး သှားရောကျစီစဈ ရာ ကိုကြျောကြျော ယူဆောငျသှားသော ကား မှနျကွောငျးစဈဆေး တှရှေိ့ရပါသညျ။
ထူးခွားသညျမှာ ကားနံပါတျ ပွောငျးလဲထားခွငျးဖွဈသညျ။ ကားနံပါတျ Bago 6L-8595 နံပါတျမှ 3J-4587 ဖွဈနသေညျ ကို စဈဆေးတှေ့ ရှိရပါသညျ။
အိန်ဒူ နယျမွရေဲစခနျးမှ ပွောပွခကျြအရ ၎င်းငျးကားအား (15.6.2020)ရကျနေ့ မှနျးလှဲပိုငျးက လှနျးညရှာတှငျ ပိုငျရှငျမဲ့ ရပျထားသညျကို တှေ့ ရှိရ၍ ရှာသူရှာသားမြားမှ ဘယျအခြိနျ ပိုငျရှငျ လာပွနျယူမလဲဟူ၍စောငျ့ကွညျ့နခေဲ့ကွောငျး (၃)ရကျခနျ့ကွာသညျအထိ ပိုငျရှငျမပျေါပဲ ရပျ ထားသညျကို တှရှေိ့ရ၍ ရဲစခနျးထံသို့ အပျနှံပေးခဲ့ကွောငျး သိရပါသညျ။